Huremu huremu 3D-foam kumashure pani ine mhepo-yekuyerera chiteshi kune yakagadzikana kutakura.
Padded tambo dzepamapfudzi, Adjustable bhandi rekunyaradza.
Maparutivi homwe & zip compartment mukati kuitira kuchengetedza uye kukusiya nemaoko emahara.
Tsigira SFH danda uye X danda nezvimwewo, mabhena masitaera anoshanda anosvika gumi nemana magadzirirwo.
Side homwe & mesh compartment kunze kwekuchengetera uye kukusiya uine maoko emahara.
Tsigira SFH danda chete, mabhena masitaera anoshanda anosvika mashanu madhizaini.
Yakagadzirwa kubva kuHDPE nekuvhuvhuta kuumba kugadzirisa.
Chibhegi chekufamba chinodhura chine ergonomically dhizaini.
Nezvisungo zvinogadziriswa uye pasina homwe.
Tsigira SFH danda uye X danda nezvimwe.
Zvitaera zvebhana zvinoshanda senge deluxe bhegi, asi mutengo usingadhure.
Yedu yekuvandudza Backpack mureza & chiratidzo, dhizaini yekubatanidza mureza uye posita pamwe chete, unogona kubatanidza mireza kumusana uye zvakare kunamira poster pane yakafuratira yekumusoro kwepaneru, zvinoreva kutarisisa kaviri kune yako meseji kupfuura yakajairika.mureza mumugwagwa.Iyo inzira yakanaka yekusimudzira brand yako kana chigadzirwa chako pakufamba kune zviitiko kana brand activation.
Kufamba bhegi rine M-shape yakadhindwa magirafu ekushambadzira uye kushambadzira, inozivikanwawo sekufamba bhegi butterfly, imwe yeanonyanya kufarirwa dhizaini yedu.bhegi bannerine maficha akadai seakareruka kumisikidza, hombe meseji nzvimbo, inoyevedza butterfly chimiro nezvimwe.
Kufamba bhegi rine W-shape yakadhindwa magirafu ekushambadzira uye kushambadzira, inozivikanwawo sekufamba bhegi Bapiro, ine maficha akadai seakareruka kumisikidza, hombe meseji nzvimbo, inoyevedza Wing chimiro nezvimwe.
Backpack Deluxe - Umbrella
Bhegi rekutanga repasi rose rine amburera inopengeka yekufamba kushambadza
Bhegi rinokuchengetera amburera, Inosunungura maoko ako kuita zviitwa uku ichikuchengetedza kubva kumaranzi eUV, Kupisa, uye Kunaya chero nguva.Chivharo cheamburera chinochinjika uye chinogona kugadzirwa nechero mifananidzo inodhinda.Amburera iri nyore kuvhura nekupeta, yakarongedzwa mubhokisi rekutakura kana isiri kushandiswa;zvakare inogona kuratidzwa pasi se X banner kuratidza meseji yako.Amburera yebhegi ndiyo yakanaka kana iwe uchida kushambadzira kwekunze kwenhare pachiitiko muZhizha.
Backpack Deluxe - Vaviri - Face
Kukwidziridzwa nekuwedzera kune yedu yekumashure mireza mireza, zvichienzaniswa nebhegi Rectangle mireza, mabhena maviri anobvumira max ekuona maitiro ane hombe brand nzvimbo.
Bango repamusoro reruoko rinogona kugadziridzwa kuti riratidze pa 45 dhigirii kune akawanda-maonero kana 180 dhigirii senge banner hombe.
Mireza yedu yebhegi chishandiso chisingaremi, chinodhura chekusimudzira uye kushambadza mhando kana sevhisi yako uchifamba pane chero chiitiko chemukati kana chekunze.
O-Shape Wearable Advertising Backpacks iyo inobvumira nzvimbo hombe yekuti iwe ugadzire uye kuprinda meseji chinhu chisingaremi, chinodhura chinoshanda chekusimudzira uye kushambadza mhando yako, chigadzirwa kana sevhisi paunenge uchifamba pane chero chiitiko chemukati kana chekunze uye mukati memhomho huru.
Bhora rekubhegi rine mwenje wekupeta dhizaini, iri nyore kuseta, kurongedza mune diki saizi, isingaremi uye inotakurika, yakasarudzika uye inoshanda zvakanyanya mumigwagwa yekushambadzira chishandiso kuratidza chiratidzo chekambani yako kana meseji yako yazvino yekushambadzira pakufamba, yakanakira zviitiko, kukwidziridzwa. uye zviratidzo.